Links Lucky | Lucky Links naadi | CoinFalls Online Casino
Lucky Links naadi is a created by Just For the Wins along with the cooperation of Microgaming. Waxaad had iyo jeer la xiriiri kartaa on screens si aad u Afyare this gaar ahaan marka aad u caajisin oo ka mid ah mashiinada midho caadiga ah oo raadi wax cusub. Si kastaba ha ahaatee, laga yaabaa in aad dareento la'aanta muuqaalada bonus in this casino naadi mobile, laakiin kuwa la heli karo filan waxaad bixin doontaa in aad maalin ka dhigi.
Ogow wax dheeraad ah oo ku saabsan Lucky ka Xiriirka kulan boosaska
Links Lucky boosaska waxaa la ciyaaray a 5 ambadeen iyo 25 paylines kaas oo u ogolaanaya in aad ku guuleysato in labada dhinacba waa ka bidix ilaa midig iyo xaq u tagay iyo sidoo. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ayna miiqdaan, waayo, 10p in ay £ 250 halkii Lataliyihii. Marka ay timaado in muuqaallada, ciyaarta waa majorly guduud, iyo nuurka show la dhalaalayay u muuqataa in ay la waxyoonay by casinos of Street Fremont ah.
Calaamooyinka oo waxaad arki doontaa on duntu ka waxaa loogu talagalay sida qiimaha kaarka kala duwan ee qalbiyada, kooxaha, majarafadihii iyo dheeman. ka sokow, qaar ka mid ah oo kale kuwaas oo laga soo qaaday theme ah waxaa loogu talagalay sida clovers 4-caleen, 7s xaafuun cas, horseshoes iyo degayo. Astaanta logo ee Lucky Links idin siin doonaa 7.5 times of wadarta saamiga iyaga caga 5 tirada guud payline kasta.
Sida ku xusan ka hor miro geed malagyo naadi Bonus waxa keeni kara caga calaamadaha gunno ku filan oo ku saabsan duntu ku. aad abaalmarinta doonista Tani toddoba dhigeeysa free taas oo kor u yimaado la version ah la ballaariyey ee duntu ku. ambadeen wax kasta oo hadda la badali doono laba jeer oo ay size asalka ah halkan aad ugu darto in la 50 paylines in la ciyaaro. Sidoo kale, wilds muuqan yaabaa in on duntu iyo sidoo. calaamadihii ka dibna sii joogi doono on daaha feature oo dhan taas oo ka dhigi doonaa tan iyo ka fudud si aad u guuleysato. Helitaanka nasiib leh habkaani waxaa laga yaabaa inaad siin qaar ka mid ah lamoodaa sare ee booska this.
Waxaa laga yaabaa inaad ka heli in theme aan la islana badan laakiin guud, naadi miro geed malagyo waa ciyaar aad u qurux badan in ay faraha la. Waxaad mar walba ka gali kartaa in this Mobile naadi casino mar kasta oo aad rabto in aad la kala duwanaansho yar ka ciyaaro gameplay ah oo ay la socdaan Afyare a bixinta hufan.